CNN | Freedom News Group
1 Comment	ဖော်မြူလာ ၀မ်း ကားမောင်း ချံပီယံ ဟောင်း မိုက်ကယ် ရှုးမာကာ နှင်းလျှောစီး မတော်တဆ ဖြစ်
၁၉၉၇ ခုနှစ် မှာ မြန်မာ နိုင်ငံရန်ကုန် မြို့ကို လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖော်မြူလာ ၀မ်း
ကားမောင်း ချံပီယံ ဟောင်း မိုက်ကယ် ရှုးမာကာ ဟာ ပြင်သစ် နိုင်ငံမာရီဘယ် မြို့က Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Jul 1
2 Comments	ခင်ပွန်း ရဲ့ငယ်ပါ ဖြတ် တဲ့ အမျိုးသမီး ထောင်ဒဏ် တစ်သက် အပြစ် ပေး
ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ အိပ်ပျော် နေ စဉ် မှာ ငယ်ပါ ကို ဓား နဲ့ဖြတ် ပြီး အမှိုက် ပုံး ထဲ လွှတ် ပစ်
ခဲ့ တဲ့ အသက် ၅၀ နှစ် အရွယ် ကတ်သရင်း ကူရ် ကို ကာလီဖိုးနီးယား ခရိုင် Orange County Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Aug 10
10 Comments	ကလေး တွေ ကို မြေတိုက်ခန်း ထဲ မှ ဖမ်းဆီးထား တဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေ ကို အရေးယူမည်
ရုရှား နိုင်ငံ ရှိ မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် က မြေတိုက် ခန်း တွင် နှစ် ပေါင်း များ စွာ
ပိတ်လှောင် ခံထား ရသည့် ကလေး များ ကို ရုရှား အာဏာ ပိုင်များ က ပြန်လည် ကယ် တင် နိုင် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 15
လှို့ ဝှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ ရဲ့ကိုလံဘီယာ အပျော်မယ် အရှုပ်တော်ပုံ
ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ မှာ ကျင်းပနေ တဲ့ အမေရိက နိုင်ငံ များ အစည်း အဝေး ကို တက်ရောက်ဖို့သွား
ရောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ရှေ့ ပြေး လှို့ ဝှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးဟာ လိင်ဖျော် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Jun 3
အာရပ် စတိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်လျှင် မြန်မာ အစိုးရ အခက်ကြုံမည် ဟု မက်ကိန်း သတိပေး
“Governments that shun evolutionary reforms now will eventually face revolutionary
change later. This choice may be deferred. It may be delayed. But it cannot be denied.”
McCain said inatelephone interview on CNN
နိုင်ငံတွင်း မှာ အခြေစိုက်သည့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်း ထောက် များ နှင့် အရီဇိုးနား အထက်
လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန် မက်ကိန်း တွေ့ ဆုံရာ မှာ သူက မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ရေး Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 14
နေတိုး တိုက်ခိုက်မှု အရှိန်မြှင့်၊ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်များ ပြန်လည် ပါဝင်
လစ်ဗျား လွတ်မြောက် ရေး အတွက် ကာတား နိုင်ငံ ဒိုဟာ တွင် ကျင်းပသည့် ထိပ်သီး အစည်း အဝေး FNG၊ ၊လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ရဲ့ တပ် တွေ ကို အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ် တွေက လည်း
ဒီနေ့ လေကြောင်း ကနေ တိုက်ခိုက်မှု လုပ် တယ်လို့ပင်တဂွန် သတင်းထုတ် ပြန်မှု တစ်ခု မှာ ဖော်ပြ
ထား ပါတယ်။ မနေ့ က ဗြိတိသျှ နဲ့ပြင်သစ် တိုက်လေယာဉ် တွေ ဟာ ကဒါဖီ ရဲ့ တင့် ကား အစီး
၂၀ ခန့် ကို ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ မှာ တော့ အစီး ၃၀ ခန့် ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ တယ်လို့ အယ်(လ)ဂျာ
ဇီးယား ရုပ်သံ က ထုတ်လွှင့် ကြေငြာ သွား ခဲ့ပါတယ်။ နေတိုး အဖွဲ့ က လည်း လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင်
ကဒါဖီ ရဲ့ တပ် တွေ ကို ပိုမို အရှိန်မြှင့် ပြီး တိုက် ခိုက် မယ်လို့ ဒီနေ့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 11
ဂျပန် အရှေ့ မြောက်ပိုင်း တွင် ၇.၁ အဆင့် အင်းအား ပြင်း ငလျှင် ထပ်လှုပ်
(CNN) — A magnitude 7.1 earthquake rattled the northeastern coast of Japan Monday
evening, the U.S. Geological Survey reported. Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 31
မိခ်ဟိုင်း ဂေါ်ဘာချဗ် ၈၀ ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ကမ္ဘာ ကို ပြောင်းလဲ စေခဲ့သူများ ဆုပေး
စစ်သားများ ၏ လစာ ကို ဂေါ်ဖီထုပ် ဖြင့် အစားထိုးပေး နေရသည့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ကို ခောတ်သစ် ကမ္ဘာ တွင်း သို့ ဆွဲသွင်း ခဲ့သည် ဂေါ်ဘာချောဗ် ၏ အသက် ၈၀ ပြည့် မွေး နေ့ နှင့် ကမ္ဘာ ကို ပြောင်းလဲ စေသူများ ဆုပေးပွဲ ကို လန်ဒန် Albert Hall ဉ်ကျင်းပရာ ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် ကီဗင် စပေ ဆီ နှင့် ရှရွန် စတုံး တို့ အား အခမ်းအနား တင်ဆက်သူများ အဖြစ် တွေ့ ရစဉ် ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယို ကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 29
1 Comment	အိုဘားမား မိန့်ခွန်းမှ ‘အိုဘားမား အယူအဆသစ်’ မွေးဖွားခြင်း
ရဲနွယ်မိုး ၊ ၊“လွတ်လပ်မှု အသာငမ်းငမ်း တောင့်တသူတွေရဲ့ တော်လှန်ရေး ထဲကနေ ကျနော်တို့ကို
မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သမိုင်းဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနဲ့ မြောက်အာဖရိက ဘက်ကို
ရွေ့လျားနေတယ်၊ အဲဒီ ရွေ့လျားမှုကိုလူငယ်တွေ ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကျနော်တို့ ကြိုဆိုကြရမယ်”
“ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘယ်တိုင်းပြည် ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်မှုကို တောင့်တသူ၊ တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သူတို့ မိတ်ဆွေရှိတာကို တွေကြရလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျနော်တုိ့ရဲ့ အဆုံးစွန် ယုံကြည်ချက် ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်မှုကို အစစ်အမှန်တိုင်းတာတဲ့ စံနှုန်းစံထား (ideals) တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်” Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 28
12 Comments	အုပ်စု လိုက် မုဒိမ်းကျင့် ခံရသည့် အမျိုး သမီး ကို ပြန်လွှတ်ပေး
LATEST :သူမ ၏ အဖြစ်မှန် ကို လှီးလွှဲ ပြောဆိုခဲ့ လျှင် ဓါစားခံ အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားသည့် သူမ၏ သမီး ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ လူကုံထံ များ နေသာ ရပ်ကွက် တွင် ဇာတ်မြုပ် နေထိုင်ရန် အကောင်း စား အိမ် တစ် လုံး ၀ယ် ပေးမည် ဟု ကဒါဖီ ၏ သစ္စာခံ များ က ခြိမ်းခြောက် ဟု SKY News တွင်ဖော်ပြ နိုင်ငံတကာ သတင်း ထောက်များ ရှိနေသည့် ထရီပိုလီရှိ ဟိုတယ် တစ်ခု သို့ ဝင်ရောက်လာကာ
သူမ အား လက်ထိပ်ခတ် ၍ နှစ် ရက် တိုင် တိုင် လစ်ဗျား စွမ်းအား ရှင် ၁၅ ဦး ကျော် က မုဒိမ်း ကျင့် ခံရသည့်
အဖြစ်ကို ရင်ဖွင့် မည့် အမျိုး သမီး ကို ယမန်နေ့ က လစ်ဗျား ဟိုတယ် တွင် ဖမ်း ဆီးသွား ပြီး
နောက် ယနေ့ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်သည် ဟု လစ်ဗျား အစိုးရ က ပြောသည်။ Read more
1 Comment	လစ်ဗျား သူပုန်များ ကဒါဖီ ၏ ဇာတိမြို့ ကို သိမ်းပိုက် ပြီး ထရီပိုလီ သို့ ချီတက်
ကဒါဖီ သစ္စာခံ တပ်များ က စစ်ဝတ်စုံ များ နှင့် လက်နက် များကို ဤ သို့ စွန့် ပစ်သွားသည်။ Getty Image FNG၊ ၊လစ်ဗျား သူပုန် တွေ က မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် အရုဏ် တက် အချိန်မှာ ကဒါဖီ ရဲ့ မွေး
ဇာတိဖြစ်တဲ့ဆာတ်မြို့ ကို နေတိုး အဖွဲ့ ရဲ့ လေကြောင်း ပစ် ကူ သိမ်း ပိုက် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ ကို မသိမ်းခင်
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ညက ရေနံထွက် ရှိရာ မြို့ တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘရီဂါ နဲ့ ရပ်(စ) လာနုဖ် မြို့ တွေ ကို သိမ်း
ပိုက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရစ်လာနုဖ် ကို သိမ်းပိုက် စဉ် မှာ ကဒါဖီ ကို သစ္စာခံ တဲ့ တပ် တွေ က ပြန်လည် မခု ခံကြတော့ ဘက်
ထရီပိုလီ မြို့ ဘက်ကို အဝေး ပြေး လမ်း မကြီး တွေ ကနေ မဟုတ် ဘဲ လမ်းငယ် တွေ က နေ ပြန်လည်
ဆုတ် ခွာ သွားကြပါတယ်။ Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,727,765 hits